Ukuze babhekane ngokuphumelelayo Izinkomo zizalela, kubalulekile ukwazi yonke imininingwane ukunakekelwa nokugcinwa kwezilwane. Isinyathelo esibaluleke kunazo zonke Udla amathole, njengoba abadala musa ikakhulukazi kudingeka izimo ezikhethekile. Kodwa abasha yomuntu wesilisa noma wesifazane kudinga Baby akhethekile ngokucophelela ekukhuleni kwayo evamile nokuthuthuka.
Ukondla ithole osanda kuzalwa
Uma inkonyane izalwe, kuba ngokushesha ezidingekayo ukudala imvelo ukhululekile. Okokuqala, kubalulekile ukuba ukuhlomisa, endaweni efudumele ezomile esingavunyelwe kushaywa, inkonyane kungaba. Ngenxa yale njongo ngokuvamile ukuhlomisa amaseli akhethekile lapho utshani umzila. Can uyifake esibayeni, kodwa uma kungenziwanga kushaywa.
Okwesibili, kudingeka kahle ukufeza yokudla lamathole. Uma inkonyane izalwe, inkomazi eyeka akunika ubisi evamile nekucala colostrum. Lena into ekhethekile, okuyinto enomsoco ngaphezu kokuba ubisi abavamile, futhi yakhiwa ezihlukahlukene amavithamini, amasosha kanye nezinye izakhi kanye namaminerali kudingeka ekukhuleni evamile nokuthuthuka wenzalo ezisanda kuzalwa. Ngaphezu kwalokho, umzimba osanda kuzalwa kakhulu othambekele izifo ezitshiyeneyo, wakhupha ukusuthisa colostrum ukuqeda izinkinga ezinjalo, njengoba kuzoba neqhaza ekuthuthukiseni ekuseni futhi uqinise amasosha omzimba.
Indlela ukondla ithole
Inkonyane yokudla kumele kwentiwe imodi ekhethekile. Colostrum - ukudla okuyisisekelo inzalo ezisanda kuzalwa. inqubo yokudla lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako kusukela ezikhathini 4 kuya ku-6 ngosuku. Ngokushesha ngemva kokuzalwa kufanele uqale nge single umthamo elixhunywe 1 ilitha ngesikhathi. Ngokuhamba kwesikhathi razvoya ngesilinganiso colostrum kufanele afinyelela 3 amalitha. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi colostrum - ubisi ekhethekile, okuyinto has a impahla akumnandi kakhulu. Into ukuthi Kusesemsinya alahlekelwe umusa wabo ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa futhi inkomo ingabe ngiyeke ukunikeza bese uqale ikhiqiza ubisi evamile. Futhi ngenxa yokuthi ngezinsuku zokuqala zokuphila, kufanele sizame ngangokunokwenzeka ukuze aphuzise colostrum ithole.
Ukondla amathole ezinsukwini zokuqala zokuphila zabo kumele sihambisane yokuthi ngosuku lwesibili isilwane day ubudala kufanele uphuze usuku 1.5 amalitha amanzi afudumele. Lokhu kuyadingeka ukuze usimamise bese ngcono inqubo ukugaya.
Kuwufanele ethi usana ithole yokudla - lokhu kumane nje kuyingxenye yomthwalo ukunakekelwa. Ukuze zikhule inzalo eqinile nenempilo musa aphumelele ngaphandle inhlangano efanele lendawo sokuhlala besikhumba saleso silwane. Kukhona ezinye imithetho ilandelwa engcono, uma kunesidingo ukukhulisa amathole enempilo.
Kabili ngosuku kuyadingeka ukuze ukuqhuba wokuvuna cell udoti nokuhlanza zonke emakhoneni ezingcolile.
Ware, esetshenziselwa ukusuthisa futhi ayakhala nenzalo, kanye lowo isetshenziselwa zisengwa izinkomo, emva ngamunye isicelo sabo kumele kahle wageza futhi scalded ngamanzi abilayo.
Ngo umbhangqwana wokuqala sezinsuku udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi colostrum ithole baphuze sips ezincane kuphela. Ukuze ulawule kangcono le nqubo kunconywa ukusebenzisa negabha lamanzi nge ingono.
amathole fattening kungaba kwenziwe ngaphandle ingono ekhethekile, kodwa uma kungenjalo, khona-ke colostrum ibekwe ku ibhakede encane. Ukukhombisa isilwane, lapho ukudla kungenziwa kancane moisten umunwe wakho ku colostrum.
Lapho isilwane abadadlana futhi bakwazi baphuze ngokuzimela ngokuphelele, ibhakede kungenziwa abethelwe odongeni, futhi colostrum ukuze ulithululele.
Inqubo yokondla inkathi ubisi
Ukuze ngempumelelo ukufeza fattening lamathole kuphethini oyifunayo, kubalulekile ukuba nginakekele okuqukethwe ithole kude lukanina. Into wukuthi uma ushiya inzalo nge unina, inkonyane niyophuzani colostrum kakhulu ngendlela afuna. Njengoba lezi zilwane ezincane abanalo umqondo Ingxenye, leyo nzalo iyoba weqise futhi ngokweqile komzimba ngeke kuholela ezinkingeni ezengeziwe lokukhiqiza ubisi yomuntu.
Kufanele siqiniseke ukuthi ithole baphuza kancane xaxa ngenxa yokuthi kakhulu umthamo kwesikhathi esisodwa kwama-colostrum is nje iphele ngqo esiswini, futhi kuzobangela inkinga wokugaya ukudla. Kubalulekile kakhulu ukubamba isikhathi yokudla lokuqala. Kungakhathaliseki ukuthi isikhathi sosuku kwakukhona ehhotela, phezu nemizuzu engu-30, ithole kufanele zithole umthamo wabo wokuqala colostrum.
Ukondla lwamasonto amathathu lamathole
Ukudla amathole amasonto amathathu - lena kuphela colostrum ubisi namanzi. Kodwa ngemva kwalesi sikhathi futhi kuyobe kancane kancane futhi babe wehlukile. Nazi izibonelo ezimbalwa zalokho edliwayo kancane esezikhulile-ithole:
Ungasebenzisa amazambane abilisiwe ukondla amankonyane.
Nika ubisi isilwane Kusengenzeka, kodwa inani isibe ezincane. Ungasebenzisa ubisi replacer ngoba amathole ukuze lungagcini okwamanje.
Lapho ngineminyaka engu-inyanga eyodwa yokudla kulekelelwa hay. Nokho, kusukela isilwane esisesincane kuyinto kabi ukwazi ukuhlafuna, hay kufanele kube okuhle nekhwalithi ithole wafunda inqubo ukuhlafuna ukudla. Ngesikhathi esifanayo, nokuvimbela hay izimpethu moisten brine.
Lapho isilwane wenziwa ngenyanga, ungakwazi ukusebenzisa ngokugcwele ubisi replacer ngoba amathole, ngokuthi akhokhe. Ngokuhamba kwesikhathi, inani ukudla ekudleni wenzalo ingavuthi ngokugcwele esikhundleni ubisi.
Isidingo yokudla efanele
Inqubo yokondla izilwane ezisencane kuyahluka kuncike ubulili besikhumba saleso silwane. Kubalulekile olinganiselayo futhi fatten Dima, amathole ie zesifazane. Kunezizathu eziningana:
Kubalulekile ukuqapha okuqukethwe amaprotheni ku ekudleni, njengoba nje inani elincane ukuhola kwakhe yokukhula kancane komnotho, futhi kakhulu ngokuwohloka ukusetshenziswa yalolu ketshezi.
Ukuze ukukhula efanele kanye nokuthuthukisa insikazi kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi imali eyanele calcium ne phosphorus, njengoba lezi izinto ezimbili nendima ebalulekile ekwakhiweni kanye nokukhula kwezicubu amathambo.
Kubalulekile ukugcina umkhondo isamba elanele amavithamini ezifana A no D. ukuze bathole ukudla add izinga hay, inhlanzi sakusihlwa. Futhi kuvusa zamagama vitamin D unga ehamba emoyeni opholile.
Okuphakelayo izinkomo besifazane kufanele libe izinto ezifana lonke ubisi, ugxilisa, ifolishi namanzi, notshani, nenhlanga, amaminerali ukuvundiswa.
Isikali feed ukukhula Dima
Ukuze kuzuzwe kukhula ngokushesha kanye nokuthuthukiswa insikazi, udinga ukwazi umthamo efanele okuphakelayo, ngaleso sikhathi kufanele inikezwe.
Kuzoqalwa nge izinsuku 15-20 of ngokuphila kwesilwane kubalulekile ukuqala akunika oatmeal ezomile. Ukuze ekuwulungiseleleni kubalulekile ukuze ahlunge umkhiqizo ngokusebenzisa ngesihlungo, exutshwe namanzi afudumele, bese kungenziwa batheleka wokuxovela. Futhi, lo mkhiqizo kungenziwa Kondliwa ibhodlela.
ukuqala at izinsuku 11 zokuphila kuyadingeka ukuze unikeze usawoti isilwane kanye wokulinganisa eliningi eyanele. Kokuqala umthamo 5 amagremu ngomkhiqizo ngamunye. Omdala isilwane, aba maningi umthamo usawoti.
Nge 10-15 Dima usuku ukuphila usungaqala ukunikeza hay wakhe. Nokho, i-ukukhula okuhle kanye nasekuthuthukisweni kwezwekazi lase ukudla kufanele kuphela high.
ifolishi Juicy izinkomo, okubandakanya imikhiqizo efana imifino impande kanye namazambane, kumele inikwe i starting isilwane nge ngenyanga yawo yesibili zokuphila.
Ukondla ngenyanga ithole elidala Nokho, kubaluleke kakhulu, kuyodingeka balandele yokudla kanye ezinyangeni esizayo. Kusukela ngenyanga yesibili zokuphila Dima oatmeal Ukudla kubalulekile esikhundleni corn noma inhlanganisela ugxilisa. Silage futhi hay inganikelwa eziningi angenamkhawulo. Uma kukhona ukwehluleka ekudaleni silo ke ungakwazi esikhundleni salo amanani ezinkulu imifino impande ekudleni. Ezinye izinguquko okwengeziwe ngamandla kuza ngesikhathi lapho inkathi ziklabe iqala.
Kufika izinyanga 3 noma 4 lemali lwezilwane CONCENTRATE ekudleni kanye ubisi uhlala ezingeni elifanayo.
Silage futhi hay Akasekho ukunikeza nhlobo. Esikhundleni salo evamile utshani obuluhlaza basha baqothuka.
Uma emadlelweni kukhona izinkinga kanye ikhwalithi utshani, amathole yasekhaya kudingeka umsoco xaxa ngesimo a ezitshekile ezitshalweni eziluhlaza.
Uma kukhona izinkinga kanye notshani obuluhlaza ingekho, inani ugxilisa nemifino izimpande ekudleni isilwane incipha ngesigamu. Lokhu kwenzeka ngo-3-4 izelwe.
Growing inyama izinhlobo njengebhizinisi
Ngaphezu avalele izinkomo kubanga kukhona inyama. Izinkomo zizalela njengoba ibhizinisi for ukudayiswa kwenyama - uyilo, ibhizinisi inzuzo kakhulu. Nokho, ukuze sihlakulele imbewu enhle, kumele udale timo letifanele yeziboshwa. Kodwa akugcini lapho. Ukuze eliningi inyama udinga ukukhetha omunye amagama inyama yezinkomo izinhlobo. Njengoba izinkomo ezivamile noma izinkunzi abe lemali sasivumela elincane kwemisipha izicubu ngokuya ukudayiswa yayo emakethe.
Amankonyane inyama zohlobo
Omunye kahle inyama izinhlobo zezinkomo - kuyinto Hereford. A inzuzo enkulu ngokunembile lolu hlobo isilwane ukuthi zivumelane ngokuphelele udlulise nanoma yimaphi izifo, futhi isimiso somzimba sokuzivikela ezifweni unamandla kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inzalo yalokhu kuhlangana izinkomo ishesha kakhulu isisindo kunanoma iyiphi enye, kanye nezilwane ngokwabo abasakwazi eziqinile. Amankonyane inyama zohlobo Hereford ozalwa isisindo 34 kuya ku-36 kg, okuyinto vele okuningi. Ngokunakekela eminye efanele ukunikeza izingane nzuzo 1 kg ngosuku. Kuyaphawuleka ukuthi ngenxa inqubo ngokushesha futhi enamandla kangaka wokukhula nokuthuthuka lamathole sintula ubisi lukamama kuphela, kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuba aft okuthuthukile ngezinsuku zokuqala zokuphila.
izinkunzi fattening ekuhlatshweni
Lapho ukuzalela izinkunzi ekuhlatshweni kamuva nabo kufanele igcinwe ukuze mayelana 15-20 izelwe. Lapho ngaphambi ekuhlatshweni kungaba kungathi izinyanga ezintathu, udinga ukuqala ukusuthisa izinyoni anda. Uma kwenziwe ngendlela efanele, khona-ke isikhathi ukuhlatshwa isilwane uyocabangela ezingaphezu kuka-400 kg. Animal umsoco owesilisa mayelana izinyanga eziyisithupha, siqukethe ubisi, kanye ezihlukahlukene izifunzo. Kuleso simo, uma ithole wazalwa entwasahlobo, ke ngeke ukwazi ukondla roughage futhi utshani amnandi green. Lokho kudla ezivusa ukukhula ngokushesha kanye nentuthuko besikhumba saleso silwane. Lapho ngineminyaka engu-Ukudla cishe unyaka owodwa nge yokunathwayo, ngejongosi, okuyinto senzelwe ekuhlatshweni, isigamu kufanele libe silage. Entwasahlobo nasehlobo izilwane engu-12 nengu-18 izinyanga, abakwazi ukunikeza ugxilisa. Wagcine Kulokhu kuphela ku amadlelo.
Indlela yokusakaza amagilebhisi nge-cuttings kanye ne-cuttings
Indlela ukupheka beet: zokupheka ezithakazelisayo, izici kanye nokubuyekeza. Indlela ukupheka isobho nge red isithombo sebhitrudi
Isikhwama ezijikelezayo - iyona Kwabiwa okunengqondo izinsiza ibhizinisi